बाग्लुङमा श्रीमान बिदेशमा श्रीमती परपुरुषसँग भेटिएपछि हंगामा, सासूलाइ देखेपछि झ्यालबाट भगाइन केटो (भिडियो) – Hot Post News
बाग्लुङमा श्रीमान बिदेशमा श्रीमती परपुरुषसँग भेटिएपछि हंगामा, सासूलाइ देखेपछि झ्यालबाट भगाइन केटो (भिडियो)
September 11, 2019 by onlinenews
नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगारमा नगएको घर पाउन मुस्किल छ । दैनिक करिब १ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपाली युवाहरु बिदेशिने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो बेरोजगारीले भोलिका दिनमा पनि नेपाली युवाहरु बिदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । यसले नेपाली समाजमा के-कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? यो सोच्ने बेला आइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपाली समाजमा धेरै प्रकारका परिवर्तनहरु आएका छन् । खरका छानाहरुमा टिन लगाइएको छ भने टिनका छानाहरुको घर कंक्रिटको ढलानयुक्त बन्दै गएका छन् । हिजो साइकल चढ्नेहरु मोटरसाइकल र स्कुटरमा सरर हिँड्न थालेका छन् । अलि राम्रो कमाइ गर्नेहरुले सहरतिर घडेरी जोडेका छन् ।
गाउँबाट छोराछोरी पढाउने बाहनामा सहरतिर बसाइँ सर्न थालेका छन् । खर्च गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त भएका छन् । पिज र वासिङ मेसिनहरु सहजै मध्यमवर्गका घरमा छिर्न थालेका छन् । परिवारका सदस्यहरु सौखिन बन्न थालेका छन् ।यसै बिचमा बाग्लुङमा एउटा कहालीलाग्दो घटना सार्वजनिक भएको छ । श्रीमान बिदेशमा भएको बेलामा यता नेपालमा श्रीमती परपुरुषसँग रंगेहात समातिएकी छन् ।उनलाई आफन्तले बितारामै भेटेपछि घटनाले डरलाग्दो मोड लिएको हो । छोरी बिरामी भएर बुहारीकोमा कुखुरा लिन जाँदा सासुले परपुरुषसँग भेटेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो ।
सासुले किन बुहारी यस्तो गरेको श्रीमान बिदेशमा छन् यस्तो किन गरेउ भन्दा बुहारीले उक्त केटालाई झ्यालबाट भगाउन सफल भइन ।उनले बुहारीलाई यस्तो गर्न हुँदैन भनेर धेरै सम्झाइ बुझाइ गरिन, यस्तो गर्दा आफ्नो घरपरिवार बिग्रिन्छ भनेर उनले सम्झाएको कुरा मिडियामा भनेकी छन् । घरमा कोहि आउछ त्यो सबैलाई थाहा हुन्छ तर बच्चालाई सेतो कम्बल ओडाई राखेको र आफु दुइ जना रातो कम्बल ओडेर सुतेको मैले देखे भन्दै सासुले मिडिया समक्ष भनेकी छन् । घटना सार्वजनिक भएपछि उनले देह त्याग पनि गरेकी छन् । बाकी तलको भिडियोमा हेर्नुहोस
Prevससुराली घर गएर ससुरा बुबाको आशिर्वाद लिएर रवि लामिछानेले मनाए आज बुबाको मुख हेर्ने दिन !
Nextलमजुङको कुन्छामा खसीबोका हाटबाजर सञ्चालन